Android auto isiri kushanda nemota yako redhiyo? pano & apos; s kugadzirisa ...
Kuru Nhau & Ongororo Android Auto isiri kushanda neyako mota redhiyo? Pano & apos; s kugadzirisa ...
Kana iwe & apos; usati wamboshandisa Android Auto , unogona kuzvidaidza kuti une rombo rakanaka, sekuteerera redhiyo mumotokari yako uye kushandisa Android Auto panguva imwechete zvave padyo-zvisingaite kwechinguva chidiki izvozvi. Idhiyo nhepfenyuro dzakaramba dzichibvisa sezvo Android Auto yakaramba ichitsvaga midhiya-inofambisa maapplication akabatana neInternet nekumira nguva dzese pawakamutsa.
Kudzokera kuchiteshi cheredhiyo icho chaitamba chiitiko chekusabatsira, zvakare, semaminetsi mashoma gare gare Android Auto inoramba ichidzokera kune yayo yega yakabatana midhiya app. Izvo & apos; hazvisi zvese zvinonakidza uye marosi sezvo Google ichiedza kugonesa mune ino Android Auto preview pane nyowani yemagetsi BMW iX.
Maitiro ekugadzirisa Android Auto mota redhiyo isiri kushanda
Enda kuZvirongwa> Kutarisira kweApp pafoni yako.
Tsvaga iyo Google app.
Tinya pamachira kumusoro kwekona yekona.
Sarudza Uninstall inogadziridza.
Gadzirisa Android Auto messing nemota yako redhiyo
Idzo nyaya dzinoita senge dzakabatana Google Mubatsiri inovawo inotungamirwa neGoogle app, an Android Auto rutsigiro tambo yakawanikwa, uye izvo zvekuvandudzwa kweMubatsiri zviri kuenda kuburikidza neGoogle App.
Kubvisa iyo yazvino kugadzirisa inoita kunge inodzosera Mubatsiri kune yayo yekuseka paanga asiri & apos; kugara uchitsvaga nekudzosera kune media midhiya neInternet kubatanidza ndiko kunobva Android Auto kutambura. Haisi mhinduro yakanaka, asi inofanirwa kuita kwenguva kusvika Google yazopedzisira yatarisira kune kwayo infotainment kuyedza.
a8 chip ine 64 bit zvivakwa
Walmart & apos; s Dema Chishanu flyer kubhururuka; tarisa madhiri pamafoni, mapiritsi uye nezvimwe
Ongororo: Vatengi vanorasikirwa nekuvimba neSamsung mushure mekurangarira kweGalaxy Note 7
Aya mamepu eIOS vs Android nyika-ne-nyika anotaurira kana maDemocrat achinyatsoda iPhones zvimwe
Apple inotarisa mamwe emoji matsva ari kuuya kuIOS 14
Samsung Galaxy S6 & S6 kumucheto kutambura nenyaya dzescreen?
Samsung Galaxy Z Fold 3 kuburitsa zuva, mutengo, maficha uye nhau
Yakanakisa iPhone XS Max skrini inodzivirira
Yakanakisa isina waya mukati-nzeve mahedhifoni kune yako iPhone kana Android foni